Matte Black Centerset Igumbi lokugezela ompompi
Ikhaya / Amanzi okugeza / Ukuphathwa Kwamabili Okuthinta Ukugeza / WOWOW Matte Black Bathroom ompompi 4 Inch Centerset
Kulinganiselwe ngo- 4.93 Ngaphandle kwe-5 okusekelwe 28 izilinganiso ikhasimende
(28 Izibuyekezo ikhasimende)
I-wowowfaucet izimisele ukuhlinzeka ngemikhiqizo ephezulu nezindleko ezisebenzayo ezingabizi. Isikhiphi sesimanje sokugezela ifenisha iza nemiyalo yokufaka efanelekile. Ukufakwa kulula futhi kulula ukufaka.
2321200B imiyalo yokufaka
WOWOW Igumbi lokugeza isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu isiketi esimnyama 2321200B izinto ezikhethwe ngokucophelela, izinto ezijiyile, ubuhlakani, ukukhiqizwa ngokunemba, inani eliphelele lemali. wonke amaphakheji athunyelwa nge-UPS noma i-USPS yezomnotho noma izinsizakalo ezijwayelekile, ngewaranti yeminyaka emithathu, futhi icutshungulwe kungakapheli usuku olulodwa lokusebenza ukuqinisekisa ukulethwa okusheshayo!
Izibambo 2 Zompompi Bokugeza: umklamo wesibambo esi-2 wokulawula okuqondile kwamanzi nokushisa, usayizi ongu-4-intshi nokulingana kwemigodi emi-3 kumabheshi amaningi nosinki; Ziphethe Phakamisa Rod Drain Assembly; Imigqa Yokunikezela Ithengiswa Ngokwehlukana
2 I-HANDLES FAUCET BATHROOM: Amanzi afudumele nalawo abandayo: I-Drip-Free Ceramic Cartridge, Yakhelwe ngaphakathi kwebhokisi lokufaka uphawu lobumba lobumba oluphezulu, ijikeleza kahle ukuze kuqinisekiswe ukusetshenziswa kwesikhathi eside ngaphandle kokudonsa amanzi nokuvuza, futhi ilawule nokushisa kwezinga lamanzi.
Ikhwalithi kanye ne-Material: I-cartridge eqinisekisiwe ye-NSF ayikhokhelwa ngaphandle futhi ayikhokhelwa, izinga lamanzi liqinisekisiwe; Indwangu: I-zinc alloy / insimbi engagqwali / insimbi
IBASIN FAUCET UMGWAQO WEQINISO: I-aerator ye-ABS isindisa amanzi angama-50% kanye ne-anti-splatter. I-Drak-free cellic cartridge ikhuthazela. Isikhiphi sekhwalithi ephezulu enomlenze wethusi, igobolondo yensimbi engagqwali, ukuqina.
IVANity FAUCET NGEMPI YAKA 3: Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi uma kukhona imibuzo. Sizoyixazulula inkinga yakho ngokushesha okukhulu.
SKU: 2321200B Categories: Amanzi okugeza, Ukuphathwa Kwamabili Okuthinta Ukugeza Tags: 2 Bamba, Ama-3 Holes, Black
Bronze Bronze / Mnyama
Zinc ingxubevange / Insimbi engagqwali
Ompompi * 1, Ukufakwa sebhithi * 1, Pop-up Drain Stopper * 1
Ngiyabathanda laba ompompi! Zazishibhile kuneLowe neKhaya Depot futhi zibukeka zizinhle kakhulu. Umfutho wamanzi muhle impela futhi.
ompompi abaqinile kakhulu. Sibe nayo cishe isikhathi esingangonyaka. Manje siyakha sathenga ezinye ezimbili zendlu yethu.
Kusasebenza kahle unyaka ngemuva kokufakwa. Ukusetshenziswa kwansuku zonke, kungabikho zimpawu zokuvuza.
Into enhle nekhwalithi enhle impela. I-E ibukeka kahle endlini yami yokugezela ezitolo imali eningi engingayithenga futhi enye indlu yami iza nayo yonke inkinobho ethi Push ukumisa amanzi kusinki endala ibinakho lokho
Yithande le ompompi futhi okuyingxenye enhle kakhulu ukukhipha amanzi, okulula kakhulu ukungena kulo mbhobho ubukeka umuhle endlini yami yokugezela futhi usebenza kahle kakhulu.
Izinto ezisezingeni elifanele nenani elifanele, ngizotusa lo mbhobho wokukhiqiza umkhiqizo
Kulinganiselwe ngo- 4 aphume 5
Kuphelele nje. Inani elikhulu, asikho isidingo sokuchitha imali engasile kwa-Home Depot. Lokhu kuyinto enhle kakhulu, yesimanje futhi kulula ukuyisebenzisa. Ngiyayithanda, yenza indlu yami yokugezela ibukeke ifana.
Ngithanda ukuthi iphakeme kangakanani futhi maphakathi nosinki ihleli. Umbala / umbala muhle. Ukusebenziseka kalula kwezibambo kuhle futhi kulula futhi. Ngizothenga enye yokugezela enye.
Ngeneliseke kakhulu ngalo mkhiqizo. Kulula ukuyifaka, inokubukeka okuhle kwanamuhla futhi isebenza kahle okungenani okwamanje. Umkhiqizo omuhle wale ntengo.
Umangale kamnandi ngekhwalithi yompompi futhi kulula ukufakwa. Yonke into ilingana ngokuphelele ekushintsheni endala, ikakhulukazi lapho amapayipi akuwona umsebenzi wethu esiwuthandayo. Imvamisa sidinga ukwenza uhambo olwengeziwe ukuthola ingxenye ethile. Lokhu kuhambe kahle.
Ngomunye ompompi abaphambili imali engathengwa kakhulu. Ngikutholile lokhu ngengxenye yalokho obekufunwa isitolo somnyango futhi bekuzwakala futhi kubukeka kungcono kunokwabo. Ngingathenga futhi
Umkhiqizo omuhle kakhulu futhi oqinile. Ipulaki inkulu futhi imboza wonke umgodi wokukhipha amanzi (awugcini nje ngokungena ngaphakathi kudayi).
Sithanda kakhulu ukuthi kuvela kanjani ngemuva kokuthi lokhu kufakiwe. Umkhiqizo uyikhwalithi enhle futhi uhlanganiswe kahle. Iza nezicucu ezihlukene ezi-2: umpompi ophethe izibambo, bese ukhipha ingxenye. Kulula ukuqonda ukuthi yini eya lapho ukufaka khona ngaphandle kwemiyalo.
Yakhiwe ngensimbi kunepulasitiki, futhi ihlala isikhathi eside, inesitayela futhi iyasebenza. NGIWUTHANDA kakhulu lo mkhiqizo uma udinga okunye ukufaka esikhundleni sakho ompompi bendawo yokugeza yangasese ye-RV. Ngizophinde ngikhethe lo mkhiqizo uma sekuyisikhathi sokushintsha isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu lasekhishini ngaphandle kombuzo.
Iqine kakhulu ngekhwalithi. Kulula futhi kulula ukufaka. Kungakho ngithola ezimbili zazo esikhundleni sezinki zami. Awucabangi ukuthi inani elingaphansi kwama- $ 35. Wow, kubaluleke kakhulu ngekhwalithi indlela engcono kakhulu kune- $ 50 noma ngaphezulu engiyithenge esitolo sendawo (Home Depot, Lowes…)
Kulula ukufaka kokuyize okusha. Ukugeleza kwamanzi kukhulu! Kuthathe cishe imizuzu eyi-10 ukufaka! Lokhu kusebenza kahle endlini yethu yokugezela yezivakashi. Siyasithanda isici esivumela ukuthi silawule ukushisa nokubanda ngasikhathi sinye. Kuza nazo zonke izingxenye nemiyalo yayilula
Lena ompompi obukeka kahle owakhiwe kahle. Kubukeka njengompompi ophakeme ojwayelekile wegama lomkhiqizo, kepha ubiza ngentengo engezansi nangaphansi kwenombolo efanelekile. Iza nama-cartridge amahle ka-ceramic avula / avala ama-valve ku-dime ngaphandle kokuvuza nakancane. Kukhona i-aerator eyakhiwe ehambisa inani elifanele lamanzi ngaphandle kokubanga i-splatter noma imisindo ye-awry. Isiphetho se-nickel ebhulashiwe sihamba kahle impela nosinki wami.
Kungithathe kuphela imizuzu engu-15 ukufaka lokhu kokuyize kwami ​​okusha. Ngiyayithanda i-pop up drain, okulula kakhulu ukuyifaka kune-drain up drain. Umpompi engilethe ngawo wenziwe ngethusi lekhwalithi ephezulu. Ingcezu eyenziwe kahle futhi eqinile, nakanjani ingahlala isikhathi eside. Futhi intengo yinkulu, nayo. Ngizothenga amanye amabili ukushintsha amanye amagumbi okugeza.
Iyakhanga kakhulu, kulula ukuyihlanganisa futhi ayivuzi. Ukuphela kwesixwayiso ukuthi amanzi aphuma nengcindezi impela. Udinga nje kuphela ukuvula izinkinobho ukuthola amanzi amaningi.
Lokhu kwenzelwa inkosi yami yokugezela, eyami yangempela iyavuza kakhulu, ngakho-ke nginqume ukuthola entsha ebukeka kahle. Ngakho-ke ngizothola isitayela esisha sokugezela kwami. Kulula kakhulu ukuyifaka, ikhwalithi enhle, futhi ngikholwa ukuthi ingcono kunemikhiqizo yamanani afanayo eLowe's noma Home Depot. Ngizihlolile lezo zitolo ezimbili, futhi ompompi babiza kakhulu lapho, iningi lazo cishe lingama- $ 70. I-WOWOW inekhwalithi efanayo kulelo banga lamanani kulezo zitolo ezimbili.
Ngiyayithanda impela le ompompi. Kwakulula ukuyifaka. Ifana kahle namakhabethe asendlini yami yokugezela kahle. Ngijabule kakhulu ngiyithengile. Kuyabiza kakhulu. Angiqiniseki ukuthi uzohlala isikhathi esingakanani kodwa kubonakala sengathi inamandla okuqina kakhulu eminyakeni edlule.
Ukufakwa okulula kakhulu. Ikhwalithi enhle.ngithatha kuphela i-10min ukuyishintsha. Amanzi aphuma ngokushesha futhi aqinile. Ngakho kuwufanele.5stars
Kuyisivumelwano esihle. Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esokugezela kwami ​​engaphansi. Nginesikhathi sokukufaka lokho namuhla. Ngiyayithanda idizayini ephathelene nompompi futhi kulula ukuyifaka. Okudumazeke kancane ukuthi kusinda kancane.kungenzeka kusho ikhwalithi ephezulu.
Inani elihlaba umxhwele kakhulu - ikhwalithi enhle, ukufakwa kalula, isitayela.Ngijabule kakhulu ngalokhu kuthenga. Umbhobho ompompi omuhle kakhulu futhi ophakeme.
Ukupakisha kobuchwepheshe Ngijabule kakhulu, nxazonke, ngalo mkhiqizo kusukela ekuthengeni ukufaka. Ngiyabonga.Liligugu elikhulu futhi kulula kakhulu ukulifaka. Konke kuqinile futhi kuqinile.
Kusetshenziselwe ukufaka indawo yokugezela okuyize okushesha ukuthumela kungathenga futhi
Into enhle. Ukufakwa okulula kakhulu. Thanda ipulaki yokukhipha intwasahlobo elayishiwe entwasahlobo. Kuhle kakhulu.
Ukufakwa okulula, akuzange kusethwe maduze, isivuno samanzi esifanayo, kulula ukuyisebenzisa futhi ukwakheka kokubukeka kubucayi kakhulu, umphumela ompompi muhle kakhulu, amanzi acacile, ingane enezinsuku eziningi, futhi kuhle, flush zonke izici zilula kakhulu, futhi ziningi izinto ezintsha
Le ompompi ilungele indlu yami yokugezela. Inezibambo futhi kulula ukubona ukuthi ayabanda noma ayashisa. Kulula futhi ukuyisebenzisa futhi umndeni wami wonke uyayithanda.